Lapho kukhona ingane emkhayeni, sesiye isenzakalo esibaluleke kunazo zonke ngoba lo mbhangqwana, bese uqala ukukhathazeka wangempela, kuhlanganise ukuqwasha, ukuhamba, bondliwe futhi namanabukeni kokushintsha. Nokho, konke lokhu kwenziwa ngenjabulo, njengoba isimangaliso encane kuyisipho esiyigugu abazali entsha. Akumangazi ukuthi kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila ingane umama nobaba bakhathazekile ukuthi izinga lokukhula nesisindo ingane okuhambelana, futhi uma ngempumelelo sihamba ukuthuthukiswa yayo bokuphila.
Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi izibalo ngqo ngalolu daba alikho nje, ngoba indima enkulu eyadlalwa yofuzo yenzalo yakho, ukuthi kwadluliselwa kubazali bakhe kanye nogogo nomkhulu. Yingakho uma ukukhula kungasheshi umyeni wakho 2 amamitha ke ungakhathazeki ngalokho ingane yakho kontanga yabo ukukhula, futhi okuphambene nalokho. I Kungashiwo okufanayo mayelana isisindo, okuyinto evame ngofuzo.
Nokho, ngo-imithi, ngokwesilinganiso singu-izinkomba ajwayelekile, bangasondela ugcine ngaphansi kolawulo ukuphakama nesisindo ingane sisadingeka. Iqiniso liwukuthi zisencane ukuba ingane inomthelela inqwaba yezinto, eminye yayo engase zibulale ke. Ngakho-ke kungcono sebenzisa ithebula engezansi isilinganiso izinkomba ezifana ubude nesisindo. ubudlelwano Ithebula, okuyinto ingatholakala zezempilo kuyoba kakhulu. usizo emindenini abasha ngokuya ukuthuthukiswa kwe-baby qapha
Ngakho, for abafana namantombazane izindinganiso ukusebenza ezahlukene njengoba amantombazane physiologically ukuthuthukisa ngokushesha kunabazali abafana. Iphinde akufanele sibhekwe nje ngokuya isisindo kanye ukuphakama, kodwa futhi yini ngengqondo, nokuthi ukuthuthukiswa ngokomzimba. Njengomthetho, intombazane ngaphambi kokuqala khasa hhayi kuphela, ahlale uhambe, kodwa futhi ukukhuluma. Ngakho-ke, abazali abasebasha kubaluleke kakhulu ukuze uthole ulwazi oluningi oluwusizo kuzo zonke izindaba ezihlobene ekuthuthukiseni ekuseni kwezingane.
Futhi kufanele kuphawulwe ukuthi ubude isisindo ingane kungenziwa yilo ngokwayo, njengoba has a ifomula ekhethekile evumela ukuba wenze lokhu. Izingxenye ezisemqoka ifomula ukukhula esetshenziswa idatha bokuphila bobabili abazali, lapho ukukhula umama nobaba sikhula, futhi umphumela lihlukaniswe by 2. Uma intombazane ke lo mphumela is sisuswe 5 cm, futhi uma lo mfana, khona-ke 5 cm wanezela. Ngokwesibonelo: (172 + 180) 2 = 176. Ukuze amantombazane ukhupha 5 cm begodu 171 cm ukuthola futhi engeza 5 cm ukuthola umfana 181 cm ukuze zonke izinto zaba lula ..
Ngonyaka wokuqala wokuphila ingane likhula ngokushesha kakhulu, okwathi ngemva kwalokho ekukhuleni kwayo kuyehla. Engingakusho nje ukuthi onyakeni wokuqala ngokuvamile isidumbu sengane ikhula nge-avareji ka-25-28 cm, okuyinto maqondana ukuphakama ngesikhathi sokuzalwa liyakhula cishe kabili. Ngesikhathi ehlobo izingane zikhula okukhulu kakhulu, ngoba imali eyanele kwelanga nokushisa, ngokuhlanganiswa ukusetshenziswa esiningi amavithamini enqubweni esasizosheshisa yentuthuko bokuphila. Ukuphakama nesisindo umntwana phezu ehlobo Siyaqiniseka ukwandisa, ngokuvamile kwaphawula labo ngesikhathi sasehlobo akazange abone izingane, bahlangana ngo-September. Cishe bonke bathi ingane ikhule kakhulu.
Ekugcineni kumele kugcizelelwe yokuthi ukukhula kanye isisindo wengane eminyakeni 2 incike ukudla okunempilo futhi ukutholakala amanani anele amavithamini. umoya ohlanzekile futhi udlala kule ndaba indima enkulu, abazali abaningi kangaka azame ukuthumela izingane zabo ehlobo amakamu izingane noma ogogo nomkhulu edolobhaneni, njengoba umkhathi eco-friendly futhi ukudla okuzenzela kunengxenye ekukhuleni kwabo ephilile.
Imisebenzi Sikhungo nengane 1 unyaka